Shirkii Guddiga Wadajirka Amaanka Soomaaliya oo Maanta Markii u Horeysay Muqdisho Ka Dhacay ( War-Saxaafadeed + Sawirro) | buqaqable.net
Senator Smith: Sharciga TPS Mudada Haloo Kordhiyo July 19, 2018
Senator Tina Smith oo ka soo jeeda gobolka Minnesota iyo 21 senator oo kale ayaa maamulka Madaxweyne Trump u diray warqad ay ku dalbanayaan in mudada loo kordhiyo sharcigan TPS ee ay Soomaalidu ku joogaan Maraykanka oo maanta la filayo in maamulku uu go'aan ka soo saaro.
Soomaaliya oo ku biirtay ururka COMESA July 19, 2018
Wararka ka imanaya dalka Zambia ayaa sheegaya in maanta halkaasi lagu ansixiyey xubinnada Soomaaliya ee ururka baayacmushtarka ee Bariga iyo Koonfurta Afrika.
Al-Shabaab oo afduubatay odoyaal July 19, 2018
Wararka ka imanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in maleeshiyada ururka Al-Shabab ay afduubeen laba ka mid ah odayaasha tuulooyin u dhow magaalada Luuq ee gobolka.
Muqdisho: Askar xabsi lagu xukumay July 19, 2018
Maxkamadda milatariga Soomaaliya ayaa min shan sano oo xarig ah ku xukuntay 18 askari oo ka mid ah guutada 14-ka October ee ciidamada xoogga. Askartan ayaa waxaa lagu soo eedeeyey abaabul qabiil ku salaysan iyo amar diiddo. Warbixintan waxaa magaalada Muqdishu nooga soo dirtay Seynab Abuukar.
Puntland: Tahriibayaal lagu celinayo Ethiopia July 19, 2018
Tahriibayaal tiradoodu dhan tahay 229 qof oo kasoo jeeda dalka Ethiopia, ayaa codsi ah in dib loogu celiyo wadankoodii waxa ay ka dalbadeen hay’adaha qaabilsan daryeelka muhaajiriinta. Arrintan ayaa timid kadib marki safarkoodi tahriibta ay kala kulmeen caqabado farabadan o aysan horey ugu talagalin. Agaasimaha Hay’ada Daryeelka Muhaajiriinta Puntland Maxamu […]
Go'aan laga filayo sharciga TPS ee Soomaalida July 19, 2018
Maamulka Trump ayaa maanta go’aan ka gaaraya in waqtiga lagu kordhiyo iyo in kale sharciga TPS oo ah sharciga KMG ah ee qaxootiga Soomaaliduay ku joogaan Maraykanka. Senator Tina Smith ayaa maamulka ka codsatay in sharciga TPS mudada loo kordhiyo.
Israel oo laga dhigay "Dal Yahuudeed" July 19, 2018
Baarlamanka Israel ayaa maanta ansixiyey sharci muran badan dhaliyey oo dhigaya in kaliya dadka Yahuudda ee Israel ay leeyihiin xuquuqda go’aan ka gaaris ee dalka, islamarkaana dhiiri-gelinaya deegaanada Yahuudda.
Mucaaradka Syria oo isku dhiibay Koonfurta July 19, 2018
Mucaaradka dalka Syria ayaa ogolaaday inay dowladda ku wareejiyaan deegaanada ku yaalla koonfurta galbeed ee dalkaas, ee ku dhow buuraha Israel ay haystao ee Golan Heights.
Maxkamad ku taalla Turkiga oo diiday sii deynta nin Mareykan ah July 19, 2018
Maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa amartay in xabsiga lagu sii hayo Andrew Brunson oo ah nin u dhashay dalka Mareykanka oo ay dowladda Turkiga ku eedeysay argagixisanimo.
Qubanaha VOA, Jul. 19, 2018 July 18, 2018
Faysal Waraabe iyo Shirkii Brussles July 18, 2018
Gudoomiyaha xisbiga UCID ee Somaliland Faysal Cali Waraabe oo ka qeybgalay shirki dhinacyada Soomaalida iyo beesha caalamka ugu soo gaba gaboobay Magaalada Brussles ayaa la hadlay VOA.
Haweenka Iyo Qoyska: Hooyo Maraykan ah oo Caruur u Dhashay Wiil Soomaali ah oo La Musaafuriyay July 18, 2018
Barnaamika Haweenka iyo qoyska ee toddobaadka waxaan ku soo qaadaneynaa wareysi ku saabsan dareenka hooyo maraykan ah oo carruur u dhashay wiil Soomaaliyeed oo dhowr bilood ka hor laga musaafiryay dalka Maraykanka.
Abiy oo ciidan u diray Soomaalida iyo Oromada July 18, 2018
Ra’iisal wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa amray in ciidamada ka socda dawladda federalka oo military iyo booliisba iskugu jira la geeyo deegaanada ay dagaaladu ka socdaan ee gobolada Oromada, Soomaalida, iyo Umadaha Koonfureed.
Dowladda oo loogu baaqay inay furto jidadka Muqdisho July 18, 2018
Dowladda Soomaaliya ayaa loogu baaqay in ay furto wadooyinka magaalada Muqdisho ee xilligan xiran.
Trump oo beddelay hadalkii Helsinki July 18, 2018
Madaxweyne Trump ayaa yiri isaga oo wariyeyaasha kula hadlaya Aqalka Cad “Waxaan ogolaaday gunaanadkii ay bulshadeena sirdoonku ka gaartay in Ruushku uu faraha la galay doorashadii 2016-kii."
Dad Soomaali ah oo lagu xiray Masar July 18, 2018
Ciidamada amaanka dalka Masar ayaa lix qof oo Soomaali ah habeenki xalay ahaa ka qabqabtay xaafadda ay Soomaalida ku badantahay ee Caashir oo ka tirsan degmada Nasri City ee magaalada Qahira.
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha, Qeybta 429-aad July 18, 2018
Dhagaystayaal ku soo dhawaada Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha, oo uu soo jeedinayo Axmed Faarax Cali (Idaajaa). Qeybtanna waa qeybtii 429-aad.​
Suuriyiin gabbaad weydiistay ciidanka Israel July 18, 2018
Tobneeyo ruux oo u dhashay dalka Suuriya ayaa Talaadadi Shalay aad ugu dhawaaday dhulka ay Israel heysato ee buuraleyda Golan Heights si ay u weydiistaan meel ay kaga gabbadaan duqeymaha dhinaca cirka ah ee kaga imanaya diyaaradaha dagaalka ee Suuriya iyo Ruushka.
Dab fara ba'an ku haya dalka Sweden July 18, 2018
Shaqaalaha dab damiska dalka Sweden ayaa tan iyo marki uu billowday xilliga xagaaga ama kuleylaha la tacaalaya dab xoogan oo ka socda meelo kala duwan oo dalkaasi ah.
War Murtiyeed Laga Soo Saaray Shirkii Brussels July 17, 2018
Magaalada Brussels waxa lagu soo gaba gabeeyay shirkii arrimaha Soomaaliya looga hadlayay, ee ay ka qeyb galeen xubno kala gaddisan oo caalamka ka socda, dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, maamul goboleedyada iyo ururada bulshada rayidka ah
Shirkii Guddiga Wadajirka Amaanka Soomaaliya oo Maanta Markii u Horeysay Muqdisho Ka Dhacay ( War-Saxaafadeed + Sawirro)
Posted on August 22, 2011 by Buqaqable.net
Muqdisho, Isniin, August 22, 2011—-Waxaa maanta markii ugu horeysay
Lagu qabtay magaalada Muqdisho Shirkii guddiga wadajirka ah ee
Amniga dalka iyadoo ay shir Guddoominayeen Ra’iisul Wasaaraha
Xukuumada KMG ah ee Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali, wakiilka gaarka ah ee xoghayaha guud ee Q/midoobay Amb. Augustine Mahiga iyo kuxigeenka wakiilka gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Mr. Wafulu Wmanyinyi.
Shirkan oo ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho ayaa waxaa sidoo kale ka soo qeyb galay wakiilada, ururada Jaamacadda Carabta, Midowga Afrika, IGAD, midowga Yurub waxaana goob joog ka ahaa wakiilo ka socday dowladdaha Mareykanka, Ingiriiska, Fransiiska, Jarmalka, Norway, Denmark, iyo Sweden.
Kulanka ayaa intii uusan soo gabagaboobin ka hor waxaa warbaahinta faahfaahin siiyay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada KMG ah ee Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali iyo
ergeyga gaarka ah ee Q/midoobay ee Soomaaliya Amb. Mahiga iyagoo sheegay in kulankani uu ahaa kulan taariikhi ah isla markaana markii ugu horeysay ay tahay oo lagu qabto gudaha dalka Soomaaliya.
Kulanka ayay sheegeen in looga arrinsaday arrimaha amniga iyo sidii loo xaqiijin lahaa nabada iyo xasiloonida dalka Soomaaliya waxayna tilmaameen inuu ku socdo weli si habsami iyo saaxiibtinimo leh.
Amb. Mahiga ayaa yiri “Kulankan wuxuu jawaab u yahay horumarka laga gaaray nabadda Soomaaliya gaar ahaana Muqdisho oo laga saaray Al shabaab, waxaana kulankan midka xiga lagu qaban doonaa halkan 2 bilood kadib oo maanta ka bilaabaneysa” ayuu yiri Mahiga oo xusay in Q/midoobay ay dib u dhis iyo tayeyn ku sameyn doonto hay’addaha nabadgelyada sida ciidamada Booliska iyo saldhigyada.
Dhinaca kale, Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Dr. Cabdiweli ayaa xusay in kulankani uu yahay midkii sagaalaad oo uu guddiga wada jirka ah ee Amnigu yeesho balse siddeedii kulan ee hore ay ka dhaceen dalka dibadiisa “Dowladda Federaalka shirkani muhiimad gaar ah ayuu u leeyahay maadaama markii ugu horeysay lagu qabtay dalka Soomaaliya waxaana rajeyneynaa in kulamada dambe ay si rasmi ah uga dhacaan dalka” ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada.
Guddigani wadajirka ee Amniga ayaa waxaa lagu aasaasay dalka Jabuuti sanaddii 2008 kadib heshiiskii ka dhacay dalkaasi Jabuuti iyadoo ujeedadiisuna ay aheyd in beesha caalamku ay ka taageerto Soomaaliya sidii loo dhisi lahaa hay’addaha Amniga si dib loogu soo celiyo Amnigii iyo kala dambeyntii dalka Soomaaliya.
« Fannaanka Soomaaliyeed Ee Caanka ee Keynaan Cabdi Warsame Ayaa Maanta Muqdisho Soo Gaaray Maxkamada Ciidanka Qalabka Sida oo Gacan-ku-Dhiiglayaal Xukuntay balse Kuma Jirin Kuwii Ka Dambeeyay dhacdadii Kaamka Badbaado »
Shirka waxaa loogu tala galay in lagu gorfeeyo sidii hore loogu sii socon lahaa ayadoo la eegayo wixii soo qabsoomay. Haddii si kale loo dhigo, deeq bixiyeyaashu waxay doonayeen in ay ogaadaan sida iyo halka ay martay lacagtoodii, iyo in ay ku baxday si waafaqsan barnaamijyadii lagu ballamay shirarkii midkan ka horreeyey.
Tan iyo markii la aasaasay 20 sano ka hor, Google wuxuu jawaabo u helay su'aalaha la weydiiyo badidood, wuxuu noqday fal (verb), Arbacadiina waxaa la dul dhigay 5 Bilayn oo ganaax ah, ka dib markii uu ka yara dheereeyey qolyaha kale ee uu xafiiltanku kala dhaxeeyo.
Majaajilaystaha caanka ah ee u ku sugan dalka Mareykanka islamarkana asal ahaan ka soo jeeda Koonfur Afrika Trevor Noah ayaa waxa ay madaxa isla galeen safiirka Mareykanka u fadhiya dalka Faransiiska, Gerard Araud,taasi oo ku saabsan dhaslashada ciyaartooydii kubadda cagta ee Faransiiska ee ku guulaysatay Koobka aduunka.
Xubnaha qoyska ayaa su'aala laga weydiinayaa iyada oo looga shakiyey lacagta dahabka oo sida shilinka ka sameeysan oo la xaday iyo dambiya kale.
Madaxwaynaha dalka Ruushka Vladimir Putin aya si kulul u cambaareeyay dadka dhaliila kulankii augu horreeyay eel aba geesoodka ahaa ee uu la yeeshay madaxwayne Donald Trump.
Arrin uu horey u beeniyay madaxweyne Trump ayaa waxaa hadda xaqiijinaya Aqalka Cad
Daadgureyntii ugu dambaysay ee ka socotay magaalooyiinkii ay ku hareereysnaayeen ciidamada dowladda gacansaarka la leh ayaa la soo gabagabeeyay, sida uu sheegay telefishinka dowladda Suuriya.
Sharci cusub oo la meelmariyay ayaa hoos u dhigaya muwaadinimada Carabta ee Israa'iil July 19, 2018
Carabta Israa'iil ku nool ayaa gaaraya boqolkii 20% dadka dalkaas, waxayna dhanyihiin 9 milyan oo qof.
Saraakiisha dowladda hoose ayaa taageero u muujiyay wiil yar oo ganacsi bilaabay July 19, 2018
Halkii ay ka xiri lahaayeen ayay saraakiisha dowladda hoose waxa ay wiilka yar siiyeen qalab, waxayna bareen sidii uu ku waafaqi lahaa sharciga.
Turkiga oo qaaday xaaladdii degdegga ahayd July 19, 2018
Dowladda Turkiga ayaa sheegtay iney qaadday xaaladdii degdegga ahayd ee uu waddanku ku jiray, oo labo sano ka hor dalka la saaray kaddib markii uu dhacay afgambigii dhicisoobay.
Shukri Jaamac oo ku guulaysatay abaalmarinta maansada gabdhaha ee BBC July 18, 2018
Shukri Jaamac Ibraahim ayaa ku guulaysatay abaalmarinta gabdhaha da'da yar ee hal abuurka leh oo ay soo qabanqaabisay laanta Af Soomaaliga ee BBC. Kaalimaha 2aad iyo 3aad waxaa kala galay Nimco Xasan Tooxyare iyo Miski Warsame.
Kanaal biyo oo ay doomuhu marayeen oo si lama filaan ah u qallalay July 18, 2018
Albaabadi biyaha kanaalka ay ka baxayeen oo furmay ayaa waxay sababtay iney istaagaan doomihi kanaalladaa mari jiray.